कांग्रेसमा देउवा पक्ष चम्कियो, डा. रावल प्यानलले गर्‍यो प्रतिस्पर्धीलाई ‘क्लीन स्वीप’ - Media Dabali
कांग्रेसमा देउवा पक्ष चम्कियो, डा. रावल प्यानलले गर्‍यो प्रतिस्पर्धीलाई ‘क्लीन स्वीप’
काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका प्रभावशाली नेता डा. रणबहादुर रावल प्यानलले प्रतिस्पर्धी पक्षलाई आन्तरिक चुनावमा ‘क्लीन स्वीप’ गरेको छ ।
पार्टीको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको कैलालीको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा रावल पक्षले एकलौटी जीत निकालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका रावल पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत जितेको छ ।
डा. रावलको पक्षले प्यानल बनाएको १ नम्बर क्षेत्रको सभापति पदमा प्रकाश शाहले जितेका छन् । क्षेत्रीय कार्यसमितिदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म सबै रावल पक्षकै उम्मेदवारले जितेका छन् ।
सभापति पदमा निर्वाचित शाहले ३५९ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी भुवनेश्वर अधिकारीले २०० मत मात्र पाएका छन् । पराजित अधिकारी निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति समेत हुन् ।
क्षेत्रीय कार्यसमितिको सचिवमा धनञ्जय रिमाल र लौटन चौधरी विजयी भएका छन् भने सहसचिवमा हरिकुमार कार्की र गौतम महतो विजयी भएका छन् । कार्यसमिति सदस्यमा ईश्वरी चौधरी, कमल कार्की र मुक्तिनाथ रेग्मी, रामजानकी डगौरा, सोमतीकुमारी चौधरी, कामताप्रसाद महतो, कालिराम डगौरा, खडककुमारी सिंह, तपेन्द्र कुँवर, वीरेन्द्र रावल, सन्तोष पौडेल, कान्ति शर्मा भट्टराई, देवबहादुर सुनार, कमलप्रसाद कठरिया, विष्णुप्रसाद डगौरा र प्रकाश बम विजयी भएका छन् । उनीहरु सबै देउवा पक्षकै हुन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा विशेष मानिएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत देउवा पक्षकै एकलौटी वर्चस्व देखिएको छ । देउवाइतर पक्षको ईश्वरी न्यौपाने पक्षका टीकापुरका हस्तीहरू पूर्व सांसद गंगाबहादुर कुँवर, टीकापुर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष फकिरसिंह कडायत, साविक धनसिंहपुर गाविसका अध्यक्ष जंगबहादुर साउँद, प्रदेश सांसद उमादेवी वादी, कांग्रेस नेता बुद्धिसागर चौधरी, वीरबहादुर हमाल, पूर्व सांसद सुशीला स्वाँर चुनावमा पराजित बनेका छन् ।